एनसिसी अनुमोदनपछिको असर - सिधा दृष्टी
अमेरिकाले नेपाललाई अनुदानका रुपमा मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी)मार्फत दिएको विकास परियोजना सम्झौता संसद्मा अनुमोदनसँगै वर्षौंदेखि राजनीतिकरुपमा गिजोलिएको अवस्थामा रहेको एमसिसी निष्कर्षमा पुगेर अब तत्काल लागू हुने स्थितिमा पुगेको छ । एमसिसी अनुमोदनपछि नेपालको भविष्य कस्तो होला भन्ने जिज्ञासा, चासो र चिन्ता आमनेपालीमा छ ।
एकथरी एमसिसी आएपछि आर्थिक दृष्टिले नेपालको कायापलट नै हुने प्रचारमा राम्रैसँग आफ्नो क्षमता र समय खर्च गरिरहेका छन् भने अर्काथरीले चाहिँ एमसिसी परियोजनासँगै अमेरिकी सेना र हतियार नेपाल भित्रिने सन्त्रास बाँडिरहेका छन् । चुनौती सकिएको छैन, थपिएको
छ । २०६८ सालदेखि यसको प्रक्रिया सुरू भयो । त्यसयताका सबै सरकारले यसलाई अगाडि बढाउनै खोजे । तर, सत्ताबाहिर हुँदा मतलबै गरेनन् वा विरोध जनाए । संसद्मा अहिले जति दल छन् तीमध्ये नेमकिपाबाहेक सबै दल यसबीच सरकारमा गएका छन् वा नेतृत्व नै गरेका छन् । र, ती कहीँ न कहीँ एमसिसी प्रक्रियामा जोडिएका छन् । तर, तिनीहरु नै यसलाई अनुकूलतामा व्याख्या गरिरहेका छन् । सत्तामा छँदा यसको प्रक्रिया अघि बढाउने, बाहिर हुँदा विरोध गर्ने चरित्र धेरै दलमा देखियो । पछिल्लो समयमा सत्ताकै घटकहरुले कार्यकर्तालाई बाहिर नाराबाजी र तोडफोडमै उतार्ने, तर भित्रभित्रै आफूहरु भने सम्झौता अघि बढाउन कसरत गर्ने गरे ।
मुलुकको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र छविसँग जोडिएको यति मह¤वपूर्ण विषयमा राजनीतिक नेतृत्वको दोधारे चरित्र देखिनु विडम्बना हो । उनीहरुको देशलाई आवश्यक पूर्वाधारका लागि अनुदान पनि माग्ने तर जनतामा भने त्यो राष्ट्रघाती छ भन्दै नेताहरु आफू पानीमाथिको ओभानो बन्न खोजे । तिनीहरुले वास्तवमा जनतालाई समेत गुह्य कुरामा गुमराहमा राखेर आफ्नो राजनीतिको रोटी सेक्न जुन कर्म गरे, त्यो वास्तवमै निम्नस्तरको छ । सत्तामा रहेकाहरुले सत्ता जोगाउने हतियारका रुपमा एमसिसीलाई प्रयोग गर्नु र प्रतिपक्षले पनि सत्ताको गठजोडलाई भत्काउने तुरूपका रुपमा प्रयोग गर्नु उत्तिकै कमजोर राजनीति हो ।
एमसिसी सहयोग पास भयो । एक चरण अघि बढ्यो । तर, यो विकास परियोजनाको सफल कार्यान्वयन अबको ठूलो चुनौती हो । संसद्बाट यसरी पारित भएपछि एमसिसी राष्ट्रिय प्रतिबद्धताको विषय बनेको छ । त्यसैले, अब थप अल्याङमल्याङ नगरी यो विकास परियोजनाको कार्यान्वयन प्रक्रिया सुरू गर्नुपर्छ । खासगरी, सत्तामा रहँदारहँदै पहिले आफ्ना कार्यकर्तालाई सडकमा ओरालेका र पछि संसद्बाट यसलाई पारित गर्न भूमिका खेलेका दलहरु अझ प्रस्ट भएर अघि बढ्न जरूरी छ । उनीहरुले प्रतिनिधिसभा घोषणाको मर्म आफ्ना कार्यकर्ता तथा शुभेच्छुक पंक्तिमा राम्ररी बुझाउन सक्नुपर्छ । परियोजना व्यवधानरहित ढङ्गले सञ्चालन हुने वातावरण सृजना गर्ने दायित्वबाट जिम्मेवार पक्ष कोही पनि च्युत हुनुहुँदैन ।
‘एमसिसी विकास अनुदान सहायता हो । विद्युतीय प्रसारणलाइन र सडक विस्तारमा यो खर्च हुन्छ । एमसिसी कम्प्याक्टमा उल्लेख भएबमोजिम आयोजना कार्यान्वयन प्रारम्भ भएको पाँच वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने प्रावधान नेपालकोविकास व्यवस्थापनका लागि नमुना साबित हुनेछ । एमसिसी सहयोगअन्तर्गत निर्माण हुने चार सय केभी क्षमताका लप्सीफेदी–रातामाटे, रातामाटे–हेटौँडा, रातामाटे–दमौली–बुटवल प्रसारणलाइन र सवस्टेसन नेपालको आन्तरिक विद्युत् प्रसारण प्रणालीको सुधार र अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापारका लागि मह¤वपूर्ण रहेको छ ।
नेपालको जलस्रोतबाट ४३ हजार मेगावाट जलविद्युत् निकाल्न सकिने, कैयौँ बिघा जमिनमा सिंचाइ सुविधा उपलब्ध हुने, स्वच्छ पिउने पानीको उपभोग र निर्यातमा समस्या नहुने तथ्यसँगै नेपाली जनता आफ्नो समृद्धिमा पानीको शक्ति जोडिएको हेर्न अधैर्य छन् । त्यसो भनेर के नेपालले विकास आयोजना सञ्चालन गर्न नपाउने ? नेपाल एक्लैले ठूलो लगानी जुटाउन सक्दैन । बाह्य लगानी आवश्यक छ । भएको वा हुने लाभ बाँडीचुँडी लिने हो । लगानीका लागि सम्भावित देश भारत, चीन, अमेरिका नै हुन् । नेपालले कसरी भारत, चीन र अमेरिकासँग समन्वय र सन्तुलन गर्न सक्ला ? यो नै अहिलेको सबैभन्दा पेचिलो सवाल हो । सन्तुलित सम्बन्धले मात्रै स्थायित्व र समृद्धिका लक्ष हासिल हुन सक्छन् भन्ने मान्यता बिर्सन हुन्न । लगानीको अवसर खोजिरहेका मुलुकले पनि नेपालको अहितमा काम र दाम परिचालन गरिदिनु हुँदैन ।
यो आर्थिक वर्षमा नेपालले भारतबाट २ अर्ब २५ करोडको विद्युत् आयात गरेको छ । ५ वर्षमा १३ मेवा विद्युत् बनेमा
आगामी दिनमा विद्युत् निर्यात गरेर सोझै व्यापार घाटा घटाउन सकिन्छ । त्यसैगरी, खाना पकाउने ग्यासको विस्थापनका लागि विद्युतीय चुलोको उपयोग, विद्युतीय सवारीसाधनको प्रवद्र्धन तथा उद्योगलाई पर्याप्त विद्युत् दिन सके पेट्रोलियम पदार्थको बढ्दो आयातमा नियन्त्रण हुनेछ ।
प्रसारणलाइन निर्माण र सीमापार विद्युत् व्यापारको सुनिश्चितता भएमा आगामी ५ वर्षमा थप १३ हजार मेवा विद्युत् आयोजना निर्माण हुन्छ । यसबाट बर्सेनि ८ लाखले प्रत्यक्ष रोजगारी पाउँछन् । यसबाट मासिक २५/३० हजार कमाउनका लागि खाडी मुलुक जानुपर्ने बाध्यता हट्छ । करिब १ लाख ३० हजार जनाले दीर्घकालीन रोजगारी पाउनेछन् ।
एमसिसीको नेपाल कम्प्याक्ट परियोजनाभित्र दुईवटा आयोजना छन् । एउटा विद्युत् प्रसारण र अर्को भनेको सडक मर्मत आयोजना । एमसिसीको कुल बजेटको ९० प्रतिशत विद्युत् प्रसारणलाइनमाखर्च हुन्छ । आयोजना निर्माणको समयमा सरकारलाई १ खर्ब ८० अर्ब भ्याट प्राप्त हुनेछ । आयोजना निर्माणपछि १५ वर्षसम्म वार्षिक ९ अर्ब ३० करोड र १६ वर्षदेखि ३० वर्ष ५३ अर्ब रोयल्टी प्राप्त हुनेछ । ३० वर्षपछि यी सबै आयोजना सरकारी हुनेछन् । यसरी आगामी ५ वर्षमा १३ हजार मेवा विद्युत् बनेमा जलविद्युत् क्षेत्रमा करिब २६ खर्ब लगानी हुनेछ । जुन लगानी प्रत्येक वर्ष ५ खर्ब २५ अर्बका दरले पूर्वाधार निर्माणमा खर्च गर्नुपर्छ र यो सरकारको हाल भइरहेको वास्तविक विकास खर्च १ खर्ब ७५/८० अर्बको तेब्बर बढी हो ।
विद्युत् प्रसारणलाइन चार सय केभी क्षमताको हुनेछ । यो लाइन विद्युत् प्राधिकरणको सवस्टेसन काठमाडौँको उत्तरपूर्व लप्सीफेदीदेखि नुवाकोटको रातोमाटेमा जान्छ । त्यहाँबाट ५७ किलोमिटरको एउटा लाइन हेटौँडातर्फ जान्छ । अर्को लाइन दमौली हुँदै नवलपरासी विद्युत् प्राधिकरणको सवस्टेसनमा पुग्छ । त्यहाँबाट झन्डै २२ कमी दक्षिण पुगेर नेपाल–भारत सीमामा पुग्छ । प्रसारणलाइनअन्तर्गत यसमा तीनवटा सवस्टेसन बन्छ । लप्सीफेदी र हेटौँडामा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले अहिले नै सवस्टेसन बनाइसकेको छ । त्यसमा धेरै सामग्री जडान गर्नुपर्ने हुँदैन भने केवल लाइन जोड्ने मात्र हो । अर्को एउटा नुवाकोटको रातोमाटेमा एमसिसी परियोजनाकै खर्चमा बन्नेछ । सवस्टेसनका लागि रातोमाटेमा चार सय रोपनी जग्गा किनिसकिएको छ, एमसीसी सम्झौतामा भएअनुसार सडक बन्नेछ ।
लुम्बिनी प्रदेशको राजधानी भालुवाङनजिकै दाङ र कपिलवस्तुको सीमा धान खोलादेखि बाँके र दाङ तथा बाँकेको सिमानामा पर्ने शिव खोलासम्मको पूर्वपश्चिम राजमार्गको ७७ किमी सडकलाई नयाँ प्रविधि प्रयोग गरेर १४ मिटर फराकिलो बनाइनेछ । अहिलेको प्रसारणलाइनको क्षमता भनेको चार सय किलो भोल्ट र तीन हजार मेगावाटको हुन्छ । कुनै बाधाविघ्न नआई यसले यो काम गर्छ । नेपालमा तीन हजार मेगावाटको माग नहुँदा पनि विभिन्न राजनीतिक पार्टी सरकारमा आउँदा पाँच वर्षमा दस हजार तथा दस वर्षमा पच्चीस हजार मेगावाटको जुन अनुमान गर्ने गरिएको छ त्यसलाई सार्थक रुप दिनका लागि गुरूयोजना बनेको छ । बर्खायाममा बिजुली बढी उत्पादन हुन्छ । त्यो सबै खपत गर्न सकिँदैन । त्यसैले, पाँच ठाउँमा भारतसँग र तीन ठाउँमा चीनसँग जोडिने गुरूयोजना बनाइएको छ ।
त्यही गुरूयोजनाअनुसार तीन हजार मेगावाट क्षमताको प्रसारणलाइन बनाउन लागिएको छ । संसद्ले स्वीकृति दिइसकेको विषयमा अब कसैले पनि थप बखेडा गर्नु उचित हुँदैन । नेपालको अर्थतन्त्रका सूचकाङ्कहरु कमजोर बन्दै गएका छन् । यसले सूचकाङ्कप्रति चासो राख्नेहरुलाई चिन्तित बनाउने गरेको छ । नेपाल आर्थिक सङ्कटको दिशातिर धकेलिँदै गएको छ । आर्थिक वृद्धिदर खुम्चिएको छ । वैदेशिक मुद्राको सञ्चिति घट्दैछ । उत्पादन खुम्चिने र आयात वृद्धि हुँदै जाने अवस्था चिन्ताको विषय बनेको छ । विदेशी मुद्रा आउने स्रोतहरु खुम्चिँदो अवस्थामा छन् । मुलुकको राजस्वले साधारण खर्च धान्न धौधौ पर्न थालेको छ ।सम्पन्न राष्ट्रले विपन्न राष्ट्रलाई आफ्नो अर्थव्यवस्थाको शून्य दशमलब सात ओडिएमा खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । विश्वकै अर्थव्यवस्थाको २५ प्रतिशतमा आफ्नो हिस्सा कायम गर्न सफल अमेरिकाले यस समझदारीअनुरुप १ सय ४० बिलियन डलर विकासोन्मुख राष्ट्रलाई दिनुपर्ने हुँदा केही लोकतान्त्रिक सर्तहरु राखी अनुदान रकम प्रवाह गरेको हो । आफ्नो लगानीबाट लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यताको विकास गर्न सदुपयोग गर्ने उसको नीति हो । यसबाट गैरलोकतान्त्रिक शक्तिलाई पीडाबोध हुनु स्वाभाविकै हो । कुनै पनि देशको पक्ष वा विपक्षमा नलाग्ने असंलग्न परराष्ट्रनीति हो हाम्रो । हामी नेपाललाई भू–राजनीति रणनीतिको भड्खालामा पर्न नदिन चनाखो हुनुपर्छ ।
एमसिसी इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिअन्तर्गतकै कार्यक्रम भएको तथ्य अमेरिकी अधिकारीले स्वीकारेको विषय हो । यस्तो परिवेशमा नेपाल ‘असंलग्न’ राष्ट्र नरहेर ‘संलग्न’ हुने बाध्यता पनि आयो । त्यस्तो बेला दुई ठूला छिमेकीबीच पूर्ण विश्वाससहित नेपाल कसरी सुरक्षित र सार्वभौम रहन सक्छ ? लोकतान्त्रिक आस्थाका हिसाबले निकै नजिक भए पनि भौगोलिक हिसाबले दूर रहेको अमेरिका सानो, गरिब मुलुक नेपालमा इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिमा बेरिएर यत्रो विरोधका बाबजुद किन अटेसमटेस गर्दै लामो अवधिको आशय लियो ? एमसिसीको सहयोग लिनेले अमेरिकाको हित, सुरक्षा र स्वार्थलाई आघात पर्ने गरी काम गर्न पाउने छैन भनिएको छ । यसबाट अमेरिकाले प्रतिद्वन्द्वी ठानेका अन्य देशका कार्यक्रम निशानामा पर्ने देखिन्छ । नेपालमा बसेर अमेरिकाले गर्ने गतिविधिलाई छिमेकीले कसरी हेर्लान् ? यो पनि शाश्वत प्रश्न हो ।
चीन, भारत त आपसमा सीमा जोडिएकै छिमेकी मुलुक हुन् र प्रतिस्पर्धी पनि । चीन पनि प्रतिक्रियाविहीन भएर बस्नेजस्तो देखिँदैन । उसले पनि बिआरआईका नाममा धेरै लगानी गर्दै आएको छ । ठूला मुलुकको भिडन्तले नेपाललाई अस्थिरतादेखि हिंसा र युद्धमा समेत धकेल्न सक्ने देखिन्छ । अहित हुने नेपालकै हो । छिमेकी फेर्न सकिँदैन । अब त अमेरिका पनि नजिकै जोडिन आइसकेको छ । नेपाल यतिखेर अमेरिका, चीन र भारतको त्रिकोणात्मक स्वार्थको शक्ति संघर्षमा चेपिन पुगिसकेको छ । धेरै कठिन छन् नेपालका आगामी दिन । एमसिसीलाई नेपालको संसद्बाटै अनुमोदन गराएर नेपालमा फराकिलो आधार तयार गराएको छ ।
एमसिसीलगायत कार्यक्रममार्फत अमेरिका ‘वासिङ्टन कन्सेन्सस’पछिको दुनियाँमा पनि आफ्नो उपस्थितिलाई निरन्तर र एकत्रित गर्न चाहेको देखिएको छ । त्यसैले, एमसिसी केवल लगानी र नेपालको आर्थिक समृद्धिका लागि सडक र जलस्रोतको विकासका शब्दमा मात्रै सीमित छैन, यो त ‘वासिङ्टन कन्सेन्सस’को पूरक पनि हो; पक्का हो । त्यसमा एसिया प्रशान्त क्षेत्र उसको प्राथमिकतामा परेको छ ।
एमसिसीका सन्दर्भमा राजनीतिक नेतृत्वले हेक्का राख्नुपर्ने मूल सवाल भने फेरि पनि नेपालले आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थका सर्तमा
सबै मित्र मुलुकसित सन्तुलित तथा मित्रवत् सम्बन्ध राख्नु नै हो । एमसिसीजस्ता परियोजना आउँछन्जान्छन्, हालसम्म नेपालले कैयौँ देशबाट विकास सहायता स्वीकारेको छ, भोलि पनि यो क्रम निरन्तर रहन्छ । तर, एउटै परियोजनाका भरमा नेपालको परराष्ट्रनीति तथा विदेश सम्बन्ध अनुचितरुपमा प्रभावित हुनु तथा यसमा अस्वाभाविक फेरबदल आउनुहुँदैन, र कसैसित सम्बन्ध बिग्रनु पनि हुँदैन । आन्तरिक राजनीतिमा जेजस्तो फरक मत रहे पनि वैदेशिक मामिलामा सबै राजनीतिक दलहरुको मोटामोटी एउटै नीति हुनैपर्छ । नेपालले इतिहासदेखि अपनाएको ‘सन्तुलन’ र ‘गतिशील तटस्थता’को स्थायी नीतिको हरदम हेक्का राख्नुपर्छ । एमसिसी र बिआरआईजस्ता महत्त्वाकाङ्क्षी कार्यक्रमबाट नेपाल दीर्घकालीन चेपुवामा पर्ने देखिएको छ ।
हुण्डी कारोबारमा संलग्न रहे�